Noderaina tao Amin’ny Tele Ny Tilikambo Fiambenana Groenlandey
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Anglisy Armenianina Azerbaijaney Azerbaijaney (Sirilika) Chichewa Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fante Frantsay Grika Groenlandey Géorgien Holandey Hongroà Iloko Indonezianina Iokrenianina Italianina Japoney Kinyarwanda Koreanina Kroaty Litoanianina Malagasy Malezianina Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Norvezianina Ouzbek Pendjabi Poloney Portogey Romanianina Rosianina Sepedi Serba Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Lesotho) Setswana Slovaky Slovenianina Soedoà Swahili Tagalog Tahisianina Tarasque Tiorka Totonac Tseky Tsonga Tzotzil Valencienne Xhosa Zapoteky (Lachiguiri) Zoloa tzeltal
Efa 40 taona tamin’ny Janoary 2013 no navoaka tamin’ny teny groenlandey ny gazety Ny Tilikambo Fiambenana. Iray amin’ireo fiteny any amin’ny Tendrontany Avaratra ny fiteny groenlandey, ary olona 57 000 fotsiny no mampiasa azy.
Vavolombelon’i Jehovah 150 eo ho eo fotsiny no any Groenlandy nefa 2 300 Ny Tilikambo Fiambenana zaraina amin’ilay fiteny. Midika izany fa tsy Vavolombelon’i Jehovah ny ankamaroan’ny olona mamaky an’io gazety io, izay antsoina hoe Napasuliaq Alapernaarsuiffik amin’ny teny groenlandey.
Hoy ny mpiandraikitra ny fandikan-teny ao Nuuk rehefa nadinadinina tao amin’ny tele: “Tena liana amin’ny Baiboly ny ankamaroan’ny Groenlandey ka izany no mahatonga azy ireo hamaky Napasuliaq Alapernaarsuiffik.”
Nanazava ny antony itiavany an’ilay gazety ny iray tamin’ireo mpandika teny teratany groenlandey rehefa nadinadinina. Hoy izy: “Izaho mihitsy no nandray soa tamin’ilay gazety. Hitako tao, ohatra, hoe inona no atao raha te ho afa-po amin’ny fiainana sy ho salama tsara. Mpifoka sigara be aho taloha na dia fantatro aza fa tsy mahasalama izany. Milaza anefa ny Baiboly hoe raha tiantsika ny ho salama tsara dia tsy maintsy manadio ny tenantsika isika.”
Nolazaina nandritra an’ilay fanadinadinana fa efa hatramin’ny 1955 tany ho any no nitory teto Groenlandy ny Vavolombelon’i Jehovah. Namoaka boky sy bokikely tamin’ny fiteny groenlandey koa izy ireo. Mpiasa an-tsitrapo danoà sy groenlandey no mandika teny ary iezahan’izy ireo atao mitovy amin’ny fitenin’olona andavanandro ny fandikan-teniny.
Hoy ny Vavolombelona iray efa ela any Groenlandy: “Efa 25 taona aho izao no nitory tamin’ny olona teto Groenlandy, ary hitako fa zava-dehibe hoe misy amin’ny fitenin’izy ireo ny bokinay. Tia mamaky ny gazetinay ny olona any amin’ny toerana mitokana. Sambo ihany no ahafahana mandeha any amin’ireny toerana ireny, ary volana vitsivitsy ao anatin’ny taona izahay vao afaka mankany. Manoratra sy mandefa boky sy gazety matetika àry izahay mandra-piverinay any amin-dry zareo.”
Miara-mivoaka amin’ny fiteny groenlandey Ny Tilikambo Fiambenana ho an’ny besinimaro sy ny gazety fianarana, nanomboka tamin’ny Janoary 2013. Azo vakina sy adika avy ao amin’ny jw.org koa ireo gazety ireo. Jereo fotsiny ao amin’ilay hoe “Zavatra Misy”, fidio ny fiteny groenlandey, ary tsindrio ny “Hikaroka.”